ko htike's prosaic collection: သမိုင်း မရှိတဲ့ တပ်မတော်လား (သို့) သမိုင်း မသိတဲ့ တပ်မတော် သားများလား
သမိုင်း မရှိတဲ့ တပ်မတော်လား (သို့) သမိုင်း မသိတဲ့ တပ်မတော် သားများလား
၆၅ နှစ်ပြည့် ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးနေ့ဟာ မကြာခင် ရောက်လာတော့မှာပါ။
နအဖ စစ်အုပ်စုကတော့ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးနေ့ကို တပ်မတော်နေ့ဆိုပြီး သမိုင်းကို ဖျက်ဆီးနေတာတော့ ကြာပါပြီ။ အားလုံးလည်း နအဖ စစ်အုပ်စုရဲ့ သမိုင်းကို ဖျက်ဆီးနေတယ် ဆိုတာ သိပြီးသားမို့ ထူးထွေပြောနေစရာတော့ မရှိဘူး မှတ်ပါတယ်။ ..... အဲ ဒီကိစ္စမှာ... မသိသလို သိသလိုနဲ့ မသိမသာ တိုက်ရိုက် အရှက်ခွဲခံနေရမှုတစ်ခုကို တွေးမိသလောက် ပြောကြည့်ချင်ပါတယ်။ (အမြင်မတူသူတွေ အားလုံး လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲလို့ရပါတယ်။)
ဒီနေ့ နအဖ စစ်အုပ်စုရဲ့ ဝါဒ ဖြန့်မှုတွေထဲမှာ "တော်လှန်ရေးနေ့"ဟာ တပ်မတော်နေ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆို တပ်မတော်နေ့ဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးစရာ ရှိလာပါတယ်။
၁၉၄၅ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှာ တပ်မတော်ကို စတင်မွေးဖွားလို့ ခေါ်ရတာလား
ရဲဘော် ၃ ကျိပ်က တပ်မတော် ဖွဲ့ဖို့ သွေးသစ္စာ ပြုခဲ့တဲ့ နေ့များလား
ရဲဘော် ၃ ကျိပ်ကို ဂျပန် စစ်တပ်က စစ်ပညာ သင်ပေးဖို့ လက်ခံလိုက်တဲ့ နေ့များလား
ရဲဘော် ၃ ကျိပ်ကို ဂျပန် စစ်တပ်ကနေ စစ်သင်တန်းဆင်းပြီး စစ်သား "စ"ဖြစ်တဲ့နေများလား
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှာများ တပ်မတော်ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အဲဒီနေ့မှာ မွေးတယ်လိ်ု့များ ထင်ခဲ့လို့ အဲဒီနေ့ကို တပ်မတော်နေ့လို့ သတ်မှတ်တာလား
ဘာကြောင့်များလဲ။ လက်ရှိ တပ်မတော်ထဲက လူတွေ ဘာကြောင့် တပ်မတော်နေ့ ပေါ်လာရသလဲ ဆိုတဲ့ သမိုင်းလောက်တော့ သိသင့်ပါတယ်။ တပ်မတော်ထဲက သိတဲ့လူများရှိရင် ဖြေပေးကြပါရယ်လို့ တောင်းပန်ကြည့်ချင်ရဲ့။ သိကြမယ်လည်း မထင်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တပ်မတော်နေ့ဆိုတဲ့ သမိုင်းမှ မရှိခဲ့တာ။
လက်ရှိ မြန်မာပြည်က နအဖ စစ်အုပ်စုရဲ့ အောက်မှာ တာဝန်ထမ်းနေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေအတွက် သေချာတွေးကြည့်ရင် အဲဒီ ကိစ္စဟာ တကယ့်ကို ရှက်စရာ ကောင်းပါတယ်။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကိုယ်တာဝန်ထမ်းနေရတဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ "တပ်မတော်နေ့" လို့ ခေါ်ရတဲ့ သမိုင်းကို မသိဘဲ "တပ်မတော်နေ့" လို့ ခေါ်နေကြရတဲ့ လူတွေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် နအဖ စစ်အုပ်စုဟာ တပ်မတော်ထဲက တပ်မတော်သားတွေ အကုန်လုံးကို သူငယ်နှပ်စားလေးတွေလို့ သတ်မှတ်နေတယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ ... တနည်းပြောရရင် ... သမိုင်း မသိတဲ့ ငအ များလို့ သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ (ဒေါက်တာသန်းထွန်း ပြောခဲ့သလို မ"အ"ရအောင် သမိုင်းကို သင်တယ်လို့ ပြောတာကို သတိရမိလို့ပါ။)
လက်ရှိ တပ်ထဲက တပ်မတော်သားတွေ အကုန်လုံးကို သူငယ်နှပ်စားဆိုပြီး နအဖ စစ်အုပ်စုဆိုတဲ့ လူတစ်စုက လိမ်တာကို သိရက်နဲ့ ခံနေရတာတော့ အတော်ခံပြင်းဖို့ ကောင်းပါကြောင်း တွေးမိသလောက် ရေးမိလိုက်ပါတယ်။
သမိုင်း မရှိတဲ့ တပ်မတော်လား (သို့) သမိုင်း မသိတဲ့ တပ်မတော် သားများလား ဆိုတာကတော့ ............
Posted by ကိုထိုက် at 00:48
as you said , somebody used to tell me that we learn history not to be dull or stupid...you can rewrite or invite sth but not history..I hope they gonna change "tat ma taw nay" to " killers' day".
It's true everyone who has gun is killing . the difference is killing enemies and killing innocent people.That's it. So no wonder it will become killer's day soon.
အရှက်မရှိတဲ့ တပ်မတော် တဲ့။ http://www.rfa.org/burmese/news/suu_kyi_condemns_election_law_shameful-03112010131454.html